पागल – मझेरी डट कम
“भाइ सलाइ छ? ” आवाजमा वजन थियो । मलाई अलिअलि डर लगेर आउछ। म खल्तीबाट लाइटर निकालेर दिन्छु ।
उसको व्यबहार एकदम अनौठो हुँदैजान्छ म हेरिरहेको छु । ऊ बाटो छेउको खम्बालाई तलदेखि माथिसम्म नियाल्छ अनि गफ सुरु गर्छ, म टाढा भएकोले उसको कुरा सुन्न सक्दिन तर मलाई थाहा छ ऊ पक्कै पनि गफ गर्दैछ हात हल्लाई हल्लाई । ऊ हाँस्न थाल्छ एकोहोरो खम्बासँग बिदावारी हुन्छ अनि म भएकै बाटो पट्टिबाट फर्किएर टाढा जन्छ , हाँस्दै हाँस्दै। भर्खरै बस बिसौनीमा आइपुगेका हरिदाइ उसको व्यबहार देखेर हाँस्न थाले, मलाई पनि हाँसो लाग्यो हाँस्दै भने “पागल” ।
आज तलब बुझ्ने दिन पनि हो क्यारे कमसेकम आज त अलि बिशेष दौडिनै पर्यो। तलब थापेको भोलिपल्टको दिनदेखि यही दिनको लागि दौडिएको छ। ” ए खर्दारसाब, त्यो हाम्रो उहाँको फाइल ठीक भयो? यसो हेरिदिनुहोला है।”
“त्यो भएको छैन, म अहिले गर्छु सर, बिहानदेखि दौडिएको दौड्यै छु यसो चिया खान पर्यो भनेर ।”
“हुन्छ हुन्छ, ए साउनी खोइ हाम्रो खर्दारसाबलाई चिया ।”
साउनी चिया लिएर आउँछे ,”ल चिया अरु के खानुहुन्छ? ” “खोइ के छ लेऊ न। समोसा छ?” “छ ।” “ल त्यही देऊ त “”के हो सर पनि आज तलब आउने दिन त अलि बेग्लै खाजा खानुपर्छ नि! आज झन घरमा नै काटेर खसीको मासु बनाएको थियो, ताजा खसीको मासु चिउरा पो खानु पर्छ नि, हाकिमसाबहरुले त त्यही खानु भो ।”
साउनीको सुझाब पनि ठिकै हो। कति चिया र समोसामा मात्रै चित्त बुझाउनु? कहिले काहीं त खानै पर्ने हो। तर आफ्ना खल्तीले फेरी आधा महिना पनि भ्याउन्न ।”हाकिमसाबले खाने र हामीले खाने कहाँ एउटै हुन्छ त हो? हामीलाई यही ठीक छ कि कसो हाकिमसाब?” हाकिमसाबले मेरो आसय बुझिहाले हाकिम न परे “खर्दार साहेब त्यसरी नभनौ न हो, लौ साहुनी देऊ देऊ एक ठाउँमा मासु चिउरा, अनि खाजा भएपछि उहाँको काम सकिदिइहाल्नुहोला है ।” “काम सुरु त अघिनै गरेको छु अब फर्केर सकिदिइहाल्छु ।” आज हाकिमको फुर्ती त्यही कामले आएको हो भन्ने कुरा पनि थाहा छ, अनि मेरो नाममा आज मासु चिउरा पनि त्यतैबाट आएको हो भन्ने पनि थाहा छ । यतिसम्म भैसकेपछि नाइँ कसरी भन्नु?
“अनि खर्दारसाब तपाईंले लाईफ इन्सुरेन्स गराउनुभयो? उहाँ एजेन्ट हुनुहुन्छ, गराउने विचारमा हुनुहुन्छ भने।”
“होइन हाकिमसाब, त्यो मरेपछि पाउने पैसाको लागि जिउँदैको पेट किन काट्नु?”
आफुले बुझेको कुरा त्यति हो। एजेन्टले मौका पाइहाले “कुरा त्यस्तो होइन। यो एक प्रकार को बचत हो। पैसा नमरिकन पाउनु पनि सकिन्छ ।”
“कुरो त्यस्तो पनि होइन, हेर्नुस् खर्दारको तलब, ५ जनाको परिवार महिनाको २०-२२ मा पुगेपछि खल्ती टक्टक्याउन सुरु हुन्छ । खल्तीमा केही नभएपछि खल्तीको सोभा पनि नआउने रहेछ हकिमसाब् धेरै खल्ती भएको पाइन्ट भएको हुनाले यता पट्टि छ कि उता पट्टि छ कि भनेर धेरै चोटि झुक्किएको हुनाले यस पाला दशैमा एउटा मात्रै खल्ती भएको पाइन्ट सिलाउने बिचार गरिराखेको छु।” मेरो कुराले हाकिमसाबको चित्त बुझाएछ क्यारे बुढा हाँस्न थाले, होटेलनी पनि हाँस्न थाली । हाकिमसाबको गफ कहिले नसकिने, आपद् त अहिले पो पर्यो। पहिला नै उठेर जाउँ भने पैसा नतिरी कसरी हिंड्नु? पैसा तिरेर हिडौं भोलिदेखि यो पसल १ महिनालाई नछिरे पनि हुन्छ सार्है अप्ठ्यारो पो पर्यो त। बरु अरु दिनकै जसरी चिया र समोसा बजाएर हिंड्नुपर्ने रहेछ पहिला नै। लोभी मन, मिठो भनेपछि पेट, जिब्रो पनि रसाएर आउने त्यतिकै। मलाई उठेर जान सार्है गाह्रो पर्यो। मैले त चिया र समोसा नै भनेको त हुँ के गर्नु बुढाले अर्डर दिइहाले । खल्तीबाट एउटा चुरोट निकालेँ र सल्काएँ। उता काम टन्न जम्मा भयो होला । फेरि हाकिमले भनेको काम पनि त्यतिकै छ। होटेलबाट बाहिर निस्किएर हेरेको २ जना अघि काम लिएर आउने बसिरहेका रहेछन। उनीहरुसँगै केही छिन गफ गरेर लगें अफिसतिर, पैसा उनीहरुले तिरेछन भने राम्रै भो, होइन भने भोलि खाजा खान जाँदा तिर्नेपर्ला। यहाँ पुगेपछि जहिले पनि मेरा पाइला अड्किन्छन्, पहिला भित्रको रमाइलो मात्रै भए पनि हेरौं भन्ने लाग्छ। भित्र गएपछि त्यही हो, लागेको बानी। घर नजिकैको पसल, गाउँका साथीहरु पनि जम्मै जम्मा भएका हुन्छन आफुभन्दा धनी साथीहरु पनि आउने भएकाले प्राय निशुल्क नै पिउन पाइन्छ तिर्ने बेला मा यसो छ्ड्के लागेपछि।
“ल आउनुस् आउनुस् खर्दार साहेब, हामी पर्खिराखेको, ए साहुजी ल ल एक गिलास ।”
म बस बिसौनीमा छु। भट्टीबाट निस्केर मलाई त्यो खम्बा देखेपछि बिहानको कुरो याद आउँछ, मेरो खल्तीबाट त्यसले चुरोट निकाल्यो, म डराएको थिएँ । त्यो हाँस्दै गयो त्यसपछि मात्र म हाँस्न सकेको थिएँ। मलाई रमाइलो लाग्छ । म बिचार गर्छु, हो बिहानको त्यो मान्छेसँग मेरा धेरै कुरा मिल्छन। उसले मेरो चुरोट खल्तीबाट निकालेर खाइदियो, मैले आज हाकिमसँग आउनेको खाइदिएँ, अहिले साथीहरुको खाइदिएँ आफ्नै खर्चमा साथीहरुलाई खुवाउने रहर त नभएको होइन। ……तर खान नजाऊँ, छोडिदिन मनले मान्दैन। त्यसले यही खम्बासँग हो क्यारे कुरा गरेको मलाई पनि यसो कुरा गरिहेर्न मन लाग्छ। तर मैले त्यसको केही कुरा नै सुनिन, के कुरा गर्यो होला? धत् मैले यो के सोचेको खम्बासँग कुरा गर्ने? होइन मेरो दिमाग त ठीक छ नि अहिलेसम्म । मलाई हाँसो लाग्छ, मैले के सोचेको होला, मलाई झन हाँसो लाग्छ। म हाँस्न थाल्छु , मनमनै हाँस्न थाल्छु। तर कति बेर पत्तै नपाई म जोड ले हाँस्न पुगेछु ।
बस बिसौनीतिरबाट आवाज आउँछ “ए बिहानको पागल त अँझै यतै घुम्दै रहेछ।”
अनेसास जापानको प्रकाशोन्मुख “छहारी” कथा संग्रहबाट